Semalt Expert: Chii Chinonzi Referrer Spam & amp; Rinonyatsoshanda Here?
Semalt Expert: Chii Chinonzi Referrer Spam & Rinonyatsoshanda Here?
Referral spam ndiyo nzira yakaderera yepamusoro iyo inosvika pawebsite yako kuburikidza nemhepo inoshushikana, yakadai se darodar.com. Zvinogoneka kugadzira zvinyorwa zvinosanganisa magwagwa anobva munzvimbo idzi - vendita trampolini elastici milano. Paunenge usingaverengi referrers, unodzivirira hutsika-hits kubva pakunhamba kwako kweGoogle Analytics. Kugadzira nzira inotarirwa kunzvimbo yako inofanira kunge iri kunyanya kunetseka paunenge uchishanda e-commerce website. Vhiki nevhiki kana kuongororwa kwemwedzi kwebhuku reGoogle Analytics kunokosha kuti iwe ugone kubudirira pane zvaunoda pasina nguva.
Frank Abagnale, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt , inotsanangura munyaya yezvinhu zvinobatsira munyaya iyi.
Paunenge uchiongorora nhoroondo yako yeGoogle Analytics, unogona kuona kushanya kusinganzwisisiki mumugumo waro uye usina kumbonzwa nezvazvo kare. Iyi ndiyo referrer spam iyo inobatanidza maitiro akawanda zuva rimwe nerimwe, uye kuputika kwezinga kunokwana 100%. Nenzira yakajeka, iyo inotaura nezvechimwe chinhu chinhu chinodzorera vashanyi kune imwe nzvimbo. Saka, zvinhu zvakadai ( kutsvaga injini mazano, zvikwata zvebhanner, emails uye zvigaro zvekubatana, zvinoshandiswa kana dzichidzorera kufamba kwako kune dzimwe nyika.
Nekunyatsotaura kutaura, kutumira spam inzvimbo yechikumbiro cheHTTP chakatumirwa neshanduro kune imwe URL, IP kana affiliate link. Vateresi vanoshanda chete kana ivo vakangosikwa naGoogle, Bing uye Yahoo. Sezvo mutauri weHTTP akazarurirwa kugadziriswa uye kuchinja, iko kushungurudzwa kukuru nevatadzi uye vanofanira kuregwa nokukurumidza nokukurumidza. Pane zvikonzero zviviri zvinoita kuti vashambadzi vanosarudza kukutumira iwe kutumira magwara..
1. Wedzera magwara kune mawebsite
Vanyori nevatambi vanogadzira zvinyorwa zvakajeka kuti vawane mazana kuzviuru zvekushanyira nevanoreva URL dzenhema. Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura kuti vanotumira mutambi wenhema kune mawebsite akasiyana-siyana kuti aumbe backlinks uye kuwedzera ruvara rwemasayiti avo. Izvi zvinouyisa mari yezvavo uye nzvimbo dzavo dzepasiti inovandudzwa mu mitsva yekutsvaga injini .
2. Wedzera hukama hwekunze
Mimwe nzvimbo dzinobudisa zvinyorwa zvinyorwa zvezuva nezuva, uye ndizvo zvinotarisirwa nevaradzi. Dzinosanganisira backlinks uye dzinopa chikwereti kune zvinyorwa zvechokwadi. Hackers inomirira kuwana backlinks kumawebsite avo vachishandisa izvo zvibatanidza. Zvakawandisa zvemashureki zvakasikwa zuva rega roga, uye kusarudzwa kwemasayiti avo kunovandudzwa mukati memazuva.
Inotarisa spam basa here?
Hungu, haiti kushanda uye inoshandiswa nemasangano eOOD chete. Makambani aya anovimbisa kukura mutengesi kune webhusaiti yako, asi zvipikirwa zvazvo zvinowanikwa pamaitiro matsva eSEO. Hatigone kurega chokwadi chokuti hakuna nzira yokubvisa referrator spam. Vanowedzera motokari kuenda kune webhusaiti, asi zvinoguma kwenguva refu hazviiti. Zvakachengeteka kutaura kuti referrer spam ine mikana yekuparadza nzvimbo yako yekutsvaga injini yekuita uye inowedzera kubhadhara kwayo. Izvo zvinotyisa zvinowanzoita basa rinokosha mukutsvaga injini. Kana bounce yakakwirira ichienzaniswa nedzimwe nzvimbo dzakadaro, iwe unoda kushanda pane zvinyorwa zvako 'hutsika uye nzvimbo yako yekutsvaga ichaderera zvishoma nezvishoma pasinei nokuti zvinoshamisa sei kutsvaga injini yako. Kunze kweiwo, unogona kuwedzera kuwedzera kwechikwata chechikwata chinogona kuwedzera kubhadhara zvikwereti pasina chikonzero.